Waxa daabacay maamulka20-11-13
Kani waa warshaddeenna, oo ku taal Degmada Warshadaha ee Huian Chengnan, Quanzhou, magaalo xeebeed ku taal Fujian, Shiinaha, taas oo ku raaxeysata sumcadda "Magaalada boorsooyinka & kiisaska". Dambiisha Hongsheng waxay ahayd ...
Waxa daabacay maamulka20-11-12
Kani waa dhismahayaga wax soo saar, oo qaadanaya qiyaastii 30,000 mitir murabac ah. Dabaqyada aqoon isweydaarsiga ayaa sifiican ugu qalabeysan in ka badan 200 shaqaale xirfad leh, 8 khadadka wax soo saarka, ...
Waxa daabacay maamulka20-11-11
Kani waa waaxdayada IQC oo leh mashiinno tijaabo ah oo buuxa. IQC (1-2 maalmood) 1. Tijaabada xajinta midabka dharka, tijaabada kala jarista dharka, maareynta boorsada iyo baaritaanka garabka garabka, baaritaanka gawaarida boorsada. 2. QC ...
Waxa daabacay maamulka20-11-10
Qolka bandhigayagu wuxuu qaadanayaa qiyaastii 2,000 oo mitir laba jibbaaran. Iyada oo 27 sano oo waayo-aragnimo ah oo arimahan, waxaan hadda nahay kuwo aad xirfad u leh qaabeynta, horumarinta iyo soo saarista bacaha kala duwan ...